သူခိုးကလူဟစ်နေသူများသို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သူခိုးကလူဟစ်နေသူများသို့
Posted by areno areno on Nov 9, 2012 in Creative Writing, Science & Religion | 15 comments
ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍သူခိုးကလူဟစ်ပြောဆိုနေကြသောသူများသည်အသိဥာဏ်မရှိပြောဆိုနေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုများ၊အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအားမောင်းထုတ်ရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆန္နပြမှုများ၊အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မျာကိုမောင်းထုတ်ရန်ကြေငြာ ချက်များအစရှိသည်တို့သည်ထင်ထင်ရှားရှားရှိသောမှတ်တမ်းစာ၇ွက်များဖြစ်ကြပါသည်။အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များလုပ်နေသောအားတရားခံများအားသိရှိပါလျှက်ပြင်ပပရောဂပါသလို့၊မရောင်ရာဆီး လူပြောကြားချက်များသည်လက်ရှိတရားခံများကိုဖုံးဖိလိုသဖြင့်ပြောကြားချက်များသာဖြစ်ပါသည်။ ရခိုင်အရေးအခင်းတွင်မည်သည့် ပြင်ပပရာဂမှမပါပါ၊လက်၇ှိပြည်တွင်ရှိရခိုင်အစွန်းရောက်တရားခံများလက်ချက်ပင်ဖြစ်ပေသည်။မောင်းထုတ်ခံအသတ်ခံရသူများသည်မိမိတို့အသက်လုပြီးထွက်
ပြေးနေရသူများကိူုပင် နောက်ကွယ်ကြိုးကိုင်သူရှိသည်ဆိုသည့်ပြောကြားချက်မှလည်းလူရယ်ဖွယ်ရာပြောကြားချက်များ ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဒီပဲယင်းအရေးအ
ခင်းကိစ္စအားအမေရိကန်နိုင်ငံယလ်တက္ကသိုလ်တွင်တွင်ပြောကြားသကဲ့သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဒီပဲယင်းတွင် ၀ိုင်းအရိုက်ခံအသတ်ခံရပြီးကိုယ်ကိုလာရိုက်လို့ထွက်ပြေးလာရသူကို အဖျက်သမားတွေလို့စွတ်စွဲပြီးအကျယ်ချုပ်(၆)နှစ်ကျမကိုချလို့ပါတယ် နောက်သူခိုးဝင်တော့အိမ်ရှင်ကိုအပြစ်ရှိလို့ထောင်ချလို့သလို့ ဖြစ်နေပါတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သုံသပ်ချက်ကို လည်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်၊သူတုန်းကလည်းဘုန်ကြီးအယောင်ဆောင်တွေကဘဲတိုက်ခိုက်တာပါ
လို့ဆိုပါတယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်လှမင်းပြောသလို့ အစ္စလာမ်တွေကိုယ်အိမ်ကိုယ်မီးရှိုတယ်ဆြို့ပီးဇတ်တိုက်
ထားသလို့ပြောနေတာ တကယ်တမ်း ကျတော့ မဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို သိနိုင်သလိုပါဘဲ၊
ဖိပြီးလူများကို အပြစ်ပုံချချင်သူများနေသည်လားဆိုသည်ကို မသိနိုင်ကြတော့ပါ။
သတင်းဌာနနှင့် ရခိုင်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်RCIC မှဦးတင်မောင်သန်းပြောကြားထား
ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို လုံးဝတာဝန်ယူနိုင်မှုမရှိတဲ့ လက်ရှိပြည်နယ်အစိုးရထွက်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရသစ်ပြန်ဖွဲ့ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရကပဲ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ပါလို့ အကြံပြုတိုက်တွန်းပါတယ်။”
ဒီ ဓာတ်ပြားဟောင်းကြီးဘဲ လာလာဖွင့်!
ဒေါ်စု ကို ရအောင် အမှုထဲဆွဲထည့်…
ရိုဟင်ဂျာ အလုပ်မဖြစ်တော့ ကမန် လို့အော်!
ဒါဂဒေါ့ မောင်ရယ် ဒီကိစ္စဂျီးပြေလယ်သွားရင်
ရခိုင်ဒေသမှစိဒဲ့ တရုပ်လုပ်ငန်းဒေကို လူဒေ အရမ်းစိတ်ဝင်ဇားလာမှာပေါ့
ခုတောင် မြန်မာဒဗျီလုံး အခွင့်ရေးတွေတောင်းနေကြတာ အသိဘဲဟာ
တရုပ်ကျေးဇူးဒေမနည်းဘူး လို့ သံမဒဂျီးဂဒေါ့ပြောဒါဘဲ
တိုင်းပျီထဲ ဘာပြဿနာမှမစိရင်လည်း လွှတ်တော်ထဲဂ အကောင်ကြီးကြီးအမီးရှည်ရှည်
ခုဆို ရခိုင်ပျီဂို စစ်တပ်က အုပ်ချုပ်ထားရဒယ်ဗျာ
ကုလားကတစ်မျိုး တရုတ်က တစ်မျိုးနဲ့ မြန်မာကိုအမှည့်ချွေချွေချင်နေကြတယ်
ရခိုင်အရေး မီးမွှေးသူတွေလို့ သံသယရှိတာက ကာလုံနဲ့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီက ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ၊ မီးထိုးသူတွေက မှူးဇော်နဲ့ ကြံ့ဖွံ့မီဒီယာများ၊ အားပေးတက်ကြွသူတွေက အွန်လိုင်းမျိုးချစ်ဆိုသူများ၊ သေဟဲ့ သေဟဲ့ဆိုတော့ သေကြရသူတွေက ရခိုင်ပြည်နယ်မှ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ …
အဲဒီဘလော့ဂ်ထိပ်မှာ.. ရွေ့နေတဲ့.. စာတန်းကိုကူးတင်လိုက်တာပါ…။
ကျုပ်လည်း… အဲဒါကို တစိတ်တပိုင်းအားဖြင့်သဘောတူမိပါရဲ့..။
မြန်မာပြည်အနောက်ဖက်ကမ်းအရေး.. တဖက်စောင်းအမြင်နဲ့.. စာ(ပို့စ်)တင်သူတွေကို.. မေးချင်တာက… “ဘာဖြစ်ချင်ကြတာလည်း…ဟင်င်င်….” လို့ပါပဲ..။
ဒီတယောက် ဇောင်းကြွလွန်းတယ် ဘာတွေလဲဟ
အေးဆေးနေကြရင်ကောင်းမယ် အားပေးတဲ့သူ ကုလိမ် ။
သူခိုးက လူဟစ်တော့ ဘယ်လိုအော်တာလဲကွ
မကြားဘူးလို့ နမူနာလေး အော်ပြပါ့လား
သူကြီးမေးလို့ပြောရတာပေါ။ရခိုင်ပြည်မှာအေးအေးချမ်ချမ်းဖြစ်စေချင်တာအဓိကပါ၊နောက်သတင်းမှား ထုတ်ပြီရေးပြီး လမ်းကြောင်းပြောင်းအောင်၊တရားခံမပေါ်အောင်လုပ်နေသူတွေကို သိအောင်ပြောချင်တာပါ.တကယ်ထွက်ပြေးရသူက အကြမ်းဖက်တရားခံဆိုတော့ရယ်ရတာပေါ။
၊နောက်တစ်ခုကိုယ်အိမ်ကိုယ်နေကိုယ်ရွာကိုယ်နေ၊ ဆူပူအောင်လုပ်ရင်တရားခံတွေကိုထိထိေ၇ာက်ရောက်အရေးယူပြီးရောပေါ။ အခုပြဿနာတွေမှာကပထမအစသွေးထိုးစမ်းပြီးဖျက်ကြည့်တယ်၊ပြီးတော့အရေး မယူမှန်းသိတော့ပို့ဆိုးလာတာကစခဲ့တာပါဘဲ၊ပြီးတော့ ဥာဏ်ပညာနှိမ့်ကျနေကြတဲံ့မြန်မာပြည်က လူတွေ တရားခံကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်ပါရက် နိုင်ငံခြားကလို့လို့ သွေးထိုးပြီး တရားခံကိုဖုံးဖိနေကြတဲ့အဖြစ်ကို သိအောင်ပြောချင်တာပါ။အသတ်ခံရသူတွေက အကြမ်းဖက်သူဖြစ်လို့ဖြစ်နဲ့၊ထွက်ပြေးနေရသူကနောက်
ကွယ်ကြိုးကိုင်သူုရှိတယ်လိုပြောနဲ့ အဖြစ်မှန်ကိုမြင်စေချင်လို့တင်ပြတာပါလို့ .. . …
အခုနောက်ဆုံးသူခို့လူဟစ်နေပြန်ပြီ ကြည့်ကြပါဘယ်လိုဟစ်လဲဆိုတော့ –အခုအေးမောင်ကတစ်မျိုးပြောင်းပြောနေပြန်ပြီ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ အေးမောင် က ရခိုင်ပြည်နယ် ၌ ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခ များမှာ ပြဿနာ များ ကြီးကျယ် စေချင်၍၊ နိုင်ငံတကာမှ ဂရုစိုက်မိ စေချင်၍ ကမ္ဘာ သိသော ပုဂ္ဂိုလ်များ လာရောက်သည့် အခါတိုင်း ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွား တတ်ကြောင်း၊ တူရကီ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး လာသည့် အခါတွင် ပေါက်တော၌ မုဒိမ်းမှု ဖြစ်ကြောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်းမှု ကော်မရှင်က မစ္စတာ ကင်တာနား လာသောအခါ စစ်တွေ၌ လူသေမှု ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း စသည်ဖြင့် ထင်ရှားသော ကမ္ဘာသိ ပုဂ္ဂိုလ်များ လာလျှင် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်တတ်ကြောင်း သူခိုးကြီးကဟစ်အော်နေပါသည်တဲ့။ လာလှူတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကို၊လာကြည့်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေကိုတရားခံလို့ပြောနေတာနော် . ..
အဲဒီဒေသဟာ.. အဓိကအားဖြင့်ရခိုင်လူမျိုးပိုင် ယူအက်စ်မှာဆို..ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားဒေသခံတို့ဒေသ (ထရိုင်ဘ်)လို့..သဘောပေါက်ထားတယ်..
သူ့မြေထဲနေရင်.. အဲဒီလူမျိုးစုအကြီးအကဲ.. စည်းကမ်းအတိုင်းတော့ နေရတာပါပဲ..။
အင်ဒီယန်းဒေသတွေမှာ.. အင်ဒီယန်းတွေက.. ဥပဒေအရ..အခွင့်အရေးပိုရှိ..ပိုရပါတယ်..။
ဆိုင်ရာတခြားပြည်ထောင်စုပြည်နယ်တွေထဲ..နယ်မြေခွပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိကြပေမယ့်.. ပြည်နယ်သား.. အမေရိကန်တွေဟာ.. သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဓလေ့ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာ.. အတည်ပြု..အသိအမှတ်ပြုရပါတယ်..။
ယူအက်စ်မှာတောင်.. ကပ်ရပ်တိုင်းပြည်.. မက်စီကိုတိုင်းပြည်က…ကျုးကျော်ဝင်လာသူ.. လူတွေအတွက် လူ့အခွင့်အရေးမရှိပါ..။ မပေးပါ..။
လ၀ကစနစ်အရ.. မိသားစုလိုက် အမေရိကားထဲဝင်လာပြီး..ခိုးနေတာ.. ခိုးအလုပ်လုပ် နေတာကိုမိရင်.. မိခင်နဲ့.. နို့စို့အရွယ်ကလေးတောင်…တကွဲစီထားပြိး ချုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်..။
လူ့အခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်ထဲမှာ.. ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်ပိုင်နက်ထဲ..ကျူးကျော်ဝင်လာသူအတွက်.. ကာကွယ်ပေးခြင်း… မရှိပါ..။
မြန်မာပြည်အနောက်ကမ်းက.. ရခိုင်မဟုတ်တဲ့..တခြားမျိုးနွယ်စုတွေဟာ.. ကိုယ်အဲဒီဒေသမှာ.. နှစ်ဘယ်လောက်ကြာကြာနေခဲ့သလည်း.. ဆိုင်ရာ..ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဥပဒေတွေနဲ့..ဘောင်ဝင်သလား.. အရင်ညှိကြည့်..ညှိခံရမယ်လို့.. သဘောပေါက်မိပါတယ်..။
ဖြစ်နိုင်ရင်.. ရောက်နှင့်ပြီး… ဒေသခံတွေက..ခိုးဝင်အခြေချသူတွေကို.. ဖေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရာမှာ..ပူးပေါင်းပေးဖို့လိုတယ်ထင်မိတယ်..
ဒီအဆင့်ကျော်ပြီးမှ.. ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်.. အခွင့်အရေးတောင်းယူရမယ်လို့.. သဘောပေါက်မိပါတယ်.
ပထမရိုက်ထားတဲ့ကော်မန့်ကပျောက်သွားလို့ပါ။သဂျီးရေ ခင်ဗျားကို ဒီတစ်ချက်တော့လေးစားသွားပါပြီ။
မူရင်းဒေသခံတွေမှာ အခွင့်အရေးပိုရတာ ဒီကျေးဇူးရှင်မသိတာလား၊မသိချင်ယောင်ဆောင်တာလား၊ ကျုပ်တို့ကပဲပညာမတတ်ဘူးလို့ထင်နေ
တာလားမသိ။အမေရိကန်တင်မဟုတ်ပါဘူး။ အဘတို့ပြောနေတဲ့ သြော်စီမှာရော ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေအခွင့်အရေးပိုရတယ်ဆိုတာေ ရာက်ဖူး၊နေဖူးသူတိုင်းသိကြပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ဘာသာတူတာနဲ့ အားလုံးကို ကိုယ့်ရန်သူလို့ ဆက်ဆံနေတာ သိပ်ရှက်စရာကောင်းပါတယ်။ အဲဒါဟာလဲ ကျုပ်ပြောရင်အလွန်ဖြစ်မှာစိုးလို့ အတော်ထိန်းနေရတာပါ။ သူခိုးကလူပြန်ဟစ်နေတာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ online သုံးနေတဲ့သူတွေကိုလာညာလို့မရပါဘူး။ ဘယ်ကောင်သူခိုး၊ဘယ်ကောင်အိမ်ရှင်လဲဆိုတာ စာဖတ်တတ်တဲ့ ကလေးကအစသိနေပါပြီ။ areno areno ရေ… ခင်ဗျားလူဟောင်းထဲကပါပဲဆိုတာလဲ ကျုပ်ခန့်မှန်းမိပါတယ်။ နာမည်ပြောင်းထားပေမယ့် ခင်ဗျားအရေးအသားကိုကြည့်ရင်ကိုသိသာနေပါတယ်။ ခင်ဗျားပေါက်ကရတင်နေမယ့်အစား ယထာဘူတကျကျစဉ်းစားစေလိုပါတယ်။ ရခိုင်အရေးမှာဘယ်သူတွေက စော်ကားနေတာလဲ ခင်ဗျားသေသေချာချာသိပါသလား။ ရခိုင်ကောရောက်ပြီးပြီလားခင်ဗျ ။သောက်ဖိုးမတန်တဲ့တဲစုတ်သာသာကို မီးတိုက်၊ရခိုင်အိမ်ကြီးတွေမီးလောင်အောင် တဲစုတ်(၄)(၅)လုံးပါတ်လည် မီးတိုက်တာမျက်မြင်မို့ ယုံခဲ့ရပါတယ်။ မီးသတ်တော့ ဂျင်ကလိနဲ့ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ပစ်။ အခုနောက်ပိုင်း လုပ်သေနတ်တွေပါပါလာပါတယ် ။ပြီးတော့သောက်ရှက်မရှိလူကြားကောင်းအောင်အော်။ မနေရဲ
တော့သတ္တိကမရှိထွက်ပြေး၊ ဘင်္ဂလားအစိုးရကလက်မခံပြန် ။နေစရာကပျောက်တော့ နိုင်ငံတကာကိုဖင်ကုန်းအော်ပြ။ ခင်ဗျားတို့သောက်ကျင့်တွေက တစ်ပုံစံတည်းပဲ။ကျေးဇူးရှင် ကျုပ်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာခင်ဗျားပိုသိမှာပါ areno areno ။နောက်ဆုံးပြောချင်တာက ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေကို စော်ကားနေတာ ခင်ဗျားတို့ဘာသာတူတွေပါ။ လက်သည်းစိတ်ရင် လက်ထိပ်နာပါတယ် ။အေရီရယ်ရှရွန်ရဲ့ စကားနဲ့အဆုံးသတ်ပါမယ်…(ခင်ဗျားတို့ဘာသာဝင်တိုင်းဟာ အကြမ်းဖက်သမားတွေမဟုတ်ပေမယ့် ၊အကြမ်းဖက်သမားတိုင်းကတော့ ခင်ဗျားတို့ဘာသာဝင်တွေချည်းပါပဲ) အဲလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်သင့်ပါပြီ။။။
လူအခွင့်အရေးဆိုတာတန်းတူပါဘဲ၊ ရခိုင်သမိုင်းပြန်ကြည့်ရင် အိန္ဒိယကပြေးလာတဲ့သူတွေ၊ချည်းမို့
ယထာဘူတကျကျစဉ်းစားစေလိုပါတယ်။ ရခိုင်အရေးမှာဘယ်သူတွေက စော်ကားနေတာလဲ
မီးတိုက်တာ မောင်ရင်တို့ကိုယ်တိုင်မို့ဗိုလ်ချုပ်လှမင်းစကားနဲ့ပြောရရင်မယုံပါဘူး၊ တိရိဆ္ဆန်တောင်ကိုယ်အသိုက်ကိုယ်မဖျက်ပါဘူး ၊မောင်ရင်တို့အိမ်မီးလောင်တော့သူတို့ဘာမှမရပါဘူး ၊ခွေးပြေးဝက်ပြေး လိုက်သတ်လို့ပြေးခဲ့တဲ့သူတွေချည်းပါဘဲ၊ သက်သေတွေအများကြီးရှိပါတယ်၊ ယုံတမ်းစကားတွေပြော
မနေပါနဲ့ ၊အခုမောင်ရင်တို့မီးရှိုတာ သူတို့ရွာတွေပါ။ ရခိုင်အိမ်တွေမရှိပါဘူး၊
ဂျင်ကလိနဲ့ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ပစ်တာ ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ကသေနတ်နဲ့ပစ်တာေ မာင်ရင်တို့ခေါ်
ထားတဲ့သူတွေပါ ။သေနတ်မိထားတဲ့သူတွေ က ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါဘဲ၊ရဲစခန်းမှာရှိတယ်သွားကြည့်
လိုက်ပါ။ လူအုပ်နဲကအသေ၀ိုင်း၊ရခိုင်လွန်မြောက်ရေးက ပစ်နဲ့ဆိုတော့အသက်လုထွက်ပြေးရတာမဆန်း
ပါဘူး၊ မောင်ရင်တို့ဝဋ်လည်လာတဲ့အခါသိပါမယ်၊ ၀ဋ်ဆိုတာ မကြာပါဘူး၊လူများသတ်၊ မီးရှိုပြန်ခံရမှာပါ၊
အ တိုးနဲ့ပြန်ပေးဆပ်ရပါလိမ်မယ်၊ ခင်ဗျားစကားနဲ့ပြောရရင်မောင်ရင်တို့ဘာသာဝင်တိုင်းဟာ အကြမ်းဖက်သမားတွေမဟုတ်ပေမယ့်၊ ရခိုင်မှာအကြမ်းဖက်သမားတိုင်းမောင်ရင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာ တွေပါဘဲဆိုတာ ကမ္ဘာကသိလာပါပြီ၊ ဗိုလ်ချုပ်လှမင်းကိုယ်တိုင်ယခုဖြစ်ပျက်နေတာကရခိုင်မျက်ကန်းမျိုးချစ်တွေရဲ့
လက်ချက်လို့ ပြောပြီးပါပြီ၊ ၀ါတွင်မရှောင်ဘုန်းကြီးကျောင်လူစု့ပြီးမီးရှိုလူသတ်ဖို့ကြံစည်နေတာကြေ ရသေ့တောင်ကြေညာချက်က သက်သေပါဘဲ၊အဲလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်သင့်ပါပြီ။။ ။လိမ်ဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့
ရခိုင်ကိစ္စကတော့.. ကုလားဖြစ်ဖြစ်… ရခိုင်ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခု ပျောက်မှ ငြိမ်းမယ့် သဘောရှိတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ကိစ္စကို ဒီလိုနည်းနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြေရှင်းလို့မရလောက်ဘူး။
ရိုးရိုးလေးပါပဲ ။ အေးဆေးနေချင်ရင်အေးဆေးဖြစ်မယ် ၊
ဆန်းဆန်းပြားပြား လာလုပ်ရင် နေစရာမရှိ အပယ်ခံဘဝ ခုလိုမျိုးရောက်ရှိလာမယ် ။
ခုဆိုရင် မြန်မာ တနိုင်ငံလုံးက တိုင်းရင်းသား ( ဘင်္ဂလီ မပါ ) တွေဟာ
မင်းတို့ ဘာသာဝင်တွေကို ရွံနေကြပီကွ ၊
မင်းတို့ မှာ မွေးလာကတည်းက အကြမ်းဖက်ချင်တဲ့ ဆဲလ်တွေ ပါလာပြီးသား
မပါလာခဲ့ရင်လည်း မော်လဝီ ဆိုတာတွေက ရိုက်ထည့်ပြီးသား ၊
ဒါ့ကြောင့်အေးဆေး နေမလား ဖင်ယားနေမလား ဆုံး ဖြတ် ။
ဘာဆို ဘာဘာ ဘာမှမသိဘူး
This post title is meant to the writer him/herself.